Amanqaku kaThobaud Clement malunga Martech Zone |
Amanqaku ngu UThobaud Clement
UThobaud Clement liGosa eliyiNtloko lesiGqeba kunye noMsunguli we-Loomly. Okoko waphumelela i-Grenoble Ecole de Management, i-France kunye neYunivesithi yase-Ottawa, Canada e-2011, uClement usebenze nenkosikazi yakhe kunye neqabane lakhe kwezoshishino, uNoemie, esungula amashishini amane aphumeleleyo.
NgoLwesibini, Novemba 19, 2019 NgoLwesibini, Novemba 19, 2019 UThobaud Clement
Eyona nto ibalulekileyo, imithombo yeendaba zentlalo yindlela-ndlela ezimbini, apho iimveliso zinokuhamba ngaphaya kokuthengisa ngokwesiko, kwaye zibandakanyeke ngokwenyani kunye nabathengi bazo ukuze bakhulise ukuthembeka ekuhambeni kwexesha. Nazi iingcebiso ezintathu inkampani yakho enokuzisebenzisa ukunxibelelana ngcono nabathengi bakho kwimidiya yoluntu. Ingcebiso # 1: Cwangcisa iNkqubo ukuze ungaze uLuphose iSaziso